Maxaan ka filan karnaa dhacdada Abriil 20 | Waxaan ka socdaa mac
Shalay waxaa si rasmi ah loo shaaciyay in Apple ay soo bandhigi doonto tan xigta Abriil 20 dhacdo cusub qalab kala duwan. Su'aasha milyanka dollar ah ayaa ah in la ogaado kuwa ay soo bandhigi doonto? Ugu dambayn ma arki doonnaa AirTags? Ma ku heli doonnaa iMac cusub Apple Silicon? Waxaan aragnay warar xan ah oo kala duwan oo ku saabsan waxa aan ku arki karno dhacdadan, laakiin Waxaan ku soo aruurineynaa galitaankan markaa uma baahnid inaad wax badan raadiso.
Apple waxay caadi ahaan ku bilaabataa soo saarkeeda wax soo saar sanadka marka ay bilaabato un wax soo saarka guga, iyo 2021 laga yaabee inaysan sidaas ahayn. Waxaan hubnaa inaan haysanno soo bandhigida qalab / qalab cusub oo lagu bilaabayo 2021 lugta midig. IPad Pro, AirTags, iMac ... waxaa jira balanqaadyo badan ama taa badalkeed warar xan ah oo soo baxay sanadka oo dhan isla markaana la aqoonsaday gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay.
Ku xiga Abriil 20 laga bilaabo Apple Park Iyo waxa markale noqon doona, dhacdo iska caadi ah, waxaan ka tagi doonaa shaki ku saabsan waxa Apple awoodi doono inuu soo bandhigo. Laakiin waxaan ku soo koobaynaa halkan wixii aan arki karnay:
1 Waxaan ugu dambeyntii arki karnay AirTags
2 Apple TV cusub ama Remote cusub oo loogu talagay telefishanka
3 New iPad Pro oo leh miniLED, iPad mini iyo qalin cusub oo Apple ah
4 24-inji iMac
5 AirPods 3, Mac Pro mini iyo Mac Pro
Waxaan ugu dambeyntii arki karnay AirTags
Ma aqaan inta jeer ee aan ka hadalnay AirTags caan ah. mar labaad isagoo leh dhacdo soo socota oo Apple ah, waxaa la qiyaasayaa in shirkaddu ay kala bixi doonto qolka dhow ee ballanqaadyada si ay uga dhigto inay heli karaan dadka isticmaala. Sumadahaas u adeegaya helitaanka walxaha lumay ee aan ku lifaaqnay mid ka mid ah kuwan. Furayaasha, iPhone-ka, iPad-ka, Mac, waxkastoo, waxaan ka heli karnaa illaa inta ay ku dhex jiraan gudaha tallaabada bluetooth. Marka maahan in ay tahay xalka saxda ah in la helo walxaha ugu qiimaha badan. Tile wuxuu mar hore ka faa'iideysanayaa Apple walxahaas oo runtii hubaal in khilaafkii ka bilaabmay uu sii socon doono.
Waxaan rajeynayaa inaan qaldanahay, laakiin Waxay ila tahay inaan sugi doono
Waxaan cusbooneysiineynaa gelitaanka, mahadnaqa macluumaadka uu bixiyay mid kamid ah Akhristeyaasheena. Aad baad u mahadsantahay qafis:
"Mid ka mid ah sheekooyinka cusub - oo ah kala duwanaanshaha Tile - ayaa ah in AirTags ay yihiin in laga heli karo meel ka baxsan caymiska Bluetooth, maaddaama ay si gaar ah ula xiriiri doonaan iPhone kasta oo u dhow. Shabakad macquul ahaan ka weyn Tile ayaa yeelan karta. Iyada oo loo marayo shabakaddan waxaad ka heli kartaa qalabka, ama, haddii la damiyo, meesha ugu dambaysa. Taasi, marka laga reebo waxa qolka cusub ee U1 uu ku siin doono meelaha aadka u saxan. "
Apple TV cusub ama Remote cusub oo loogu talagay telefishanka
Waxaa sidoo kale loo maleynayaa in Apple ay ka fiirsaneysay suurtagalnimada abuurista a qalab cusub oo la xiriira Apple TV. Khibrad cusub oo xitaa lahaan doonta curiye aad u badan oo curiya. Waxaan ka hadleynaa hago cusub oo telefishin ah oo ka farxin doona dadka isticmaala. Shaki la'aan waxay noqon laheyd cusbooneysiin lafilayo maxaa yeelay waxaan isticmaaleynay isla qalabka mudo dheer shaki la'aan hadii Apple ay rabto inay kobciso Apple TV + wey cusbooneysiin kartaa qalabka waxayna noqon kartaa mid soo jiidasho leh dadka isticmaala.
New iPad Pro oo leh miniLED, iPad mini iyo qalin cusub oo Apple ah
Tani waa mid ka mid ah xanta cusub. Waxay noqon laheyd in Apple horey u laheyd a cusub iPad Pro oo leh shaashadaha miniLEde xitaa waxaa laga hadlayaa inuu keenayo qalin cusub oo Apple ah. Qalin cusub oo tiknoolajiyad aad u tiro badan leh oo ka sarreeya dhammaan wixii ka sii saxsanaanta badan, oo leh shaqooyin taabasho cusub iyo wixii ka sarreeya oo dhan oo leh is-maamul aad u badan
2020 iPad Pro wuxuu soo degay suuqa dhamaadka Maarso waana in lafilayaa inaan iPad Pro ku yeelan doono bandhigan dhamaadka Abriil. Shaashaddaas miniLED Waxaad kuheli doontaa qaraar, tayada shaashadda iyo wixii kabadan waxqabadka batteriga. Dhibaatadu waxay tahay in alaab-qeybiyeyaashu ay haystaan ​​dhibaatooyin xagga saadka ah sidaa darteed waxay u badan tahay in la soo bandhigi doono Abriil 2 laakiin ma iibin doono sida ugu dhakhsaha badan ee aan jeclaan lahayn.
Iyadoo ay weheliso iPad Pro waxaa imaan doona jiilka cusub ee ipad mini. IPad-kan aad si adag uqabato oo aadan rabin inaad baabi'iso waa inuu yahay cabir ku habboon in lagu kabo Pro ama xitaa Mac. Waxaan jeclahay inaan awoodo inaan meel walba ku qaato oo aan qoraal ku qaato. Lugo sii wado ka shaqeynta Mac-da sidoo kale waa wax weyn in la akhriyi karo. Way kufiican tahay dhinac walba. Qaabka cusub wax badan kama duwanaan doono kii hore mooyee jab wanaagsan iyo xallin fiican.
Waxaan iskudayaa inaan dhaho in haddii Apple sii daayo, ay la jaan qaadi karto Apple Pencil 2 maadama qalin cusub uu u bixi doono iPad Pro.
Waxaan u nimid waxa noqon kara bakhaarrada daabacaadda dhacdadaas. A cusub 24-inji iMac leh Apple Silicon. Waa la waayey oo xanta ayaa aad u kacsan oo xiiso leh. Waxaan rabnaa iMac cusub, waxaan u baahanahay iMac cusub oo leh Apple Silicon. Apple ku dhowaad waa lagu qasbay inuu soo bandhigo.
AirPods 3, Mac Pro mini iyo Mac Pro
Waxaa sidoo kale jiray warar xan ah oo ku saabsan seddexdan qodob. Laakiin waa inaan dhahnaa ma aaminsani haba yaraatee in la soo saari doono. Xaqiiqdii, waxaan kaliya u maleynayaa in haddii ay jiraan wax ay sameyn doonaan AirPods 3 mana noqon doonaan ilaa dayrta sanadkan.
U badan tahay:
.- Qalinka Tufaaxa
.- 24-inch iMac oo leh silikoon Apple ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Maxaan ka filan karnaa dhacdada Abriil 20
Mid ka mid ah sheekooyinka waawayn - in farqiga u dhexeeya Tile - uu yahay in AirTags ay yihiin kuwo laga heli karo meel ka baxsan caymiska Bluetooth, maadaama ay si gaar ah ula xiriiri doonaan iPhone kasta oo u dhow. Shabakad macquul ahaan ka weyn Tile ayaa yeelan karta. Iyada oo loo marayo shabakaddan waxaad ka heli kartaa qalabka, ama, haddii la damiyo, meesha ugu dambaysa. Taasi, marka laga reebo waxa cusub ee 'U1 chip' uu ku siin doono meelo aad u sax ah.
Ka jawaab qafiska
Mahadsanid. Waxaan ku cusboonaysiiyay gelitaanka macluumaadkaaga cusub
Jawaab Manuel Alonso
Dukaammada Apple Apple oo dhan ayaa hadda furan